VITEC အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာ Rapid ချဲ့ဘို့သင်တန်းအမှတ်စဥ်သတ်မှတ်ရန် - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » သတင်း » VITEC အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာ Rapid ချဲ့ဘို့သင်တန်းအမှတ်စဥ်သတ်မှတ်ရန်
က Nicolas Pons, VITEC မှာ VP လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအရှေ့အလယ်ပိုင်း
VITEC အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာ Rapid ချဲ့ဘို့သင်တန်းအမှတ်စဥ်သတ်မှတ်ရန်
, စစ်တပ်နှင့်ကာကွယ်ရေးကဏ္ဍတိုးအသုံးစရိတ်၏လှိုင်းကိုစီးနှင့်စစ်ဆင်ရေးချောမွေ့ခြင်းနှင့်အဆင့်မြင့်နည်းပညာများအသုံးပြုခြင်းမှတဆင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်ပိုကောင်းအောင်ဖို့ကိုနှိပ် Oil & Gas များအတွက်လိုအပ်ချက်နှင့်ထုတ်လွှင့်သည့်အဖွဲ့အစည်းများအားဖြင့်ကျားကန် VITECend-to-end သည်ဗီဒီယို streaming များဖြေရှင်းချက်အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်, အရှေ့အလယ်ပိုင်းတွင်၎င်း၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်နှိမ့်ချနှစ်ဆတိုးလျက်ရှိသည်။ ယခုနှစ်အစောပိုင်းကကုမ္ပဏီ၏ဒူဘိုင်းရှိရုံး၏ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲနှင့်အတူဒေသတွင်းယင်း၏ရှေ့မှောက်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးချိန် မှစ. တစ်ခုအရှိန်မြှအရှိန်အဟုန်မှာယင်း၏လုပ်သားအင်အားနှင့်ဖောက်သည်အခြေစိုက်စခန်းတိုးချဲ့ခဲ့သည်။
က Nicolas Pons, VP လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာ VITEC
ဒေသတွင်း၌မိမိအဖှဲ့အစညျး၏လျင်မြန်စွာတိုးချဲ့, က Nicolas Pons, VP လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာရှင်းလင်း VITEC သောအာကာသအား "ဟုပြောသည် VITEC အတွင်းလည်ပတ်, ဒေသတွင်း၌ရေပန်းစားလူမှုစီးပွားအခြေအနေများကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုးတက်မှုနှုန်းပိုဆိုး, ကျေးဇူးအလျှင်းမပြုဘဲသက်သေပြခဲ့ကြသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းဒေါင်လိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အနာဂတ်-အထောက်အထားကိုဖြတ်ပြီး, စျေးကွက်-ဦးဆောင်ဖြေရှင်းချက်ဖောက်သည်၎င်းတို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ၏အရည်အသွေးနှင့်လုံခြုံရေးအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချမှုနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ရည်မှန်းချက်ကြီးရည်ရွယ်ချက်များအောင်မြင်ရန်ကူညီနေတာပါ။ ကျနော်တို့ခိုင်မြဲစွာဒေသတွင်းမှကျူးလွန်ခဲ့ကြပြီးကျနော်တို့ဖောက်သည်တွေနဲ့ကျနော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးပိုမိုနက်ရှိုင်းတို့၏ channel ကိုခိုင်ခံ့စေခြင်းနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုကိုဖြန့်ဝေကဏ္ဍ၏ရင့်ကျက်မောင်းကိုကူညီအဖြစ်ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့တော်၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ "
Pons နှစ်ခုသော့ချက်နည်းပညာအာရုံစိုက်ဒေသများကွပ်ထားတဲ့ VITEC အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာ:
point-to-Point သို့အသံလွှင့်: ခြိုးဖောကျသတင်းနှင့်ဒေသတွင်း၌ဖြစ်ရပ်များ၏အနီး-စဉ်ဆက်မပြတ်စီးကိုဖုံးလွှမ်းရန်အတောမှတိုက်ရိုက်အစီရင်ခံဘို့လိုအပ်ကြောင်းပေးသော, VITEC ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်မရှိမဖြစ်ဖြေရှင်းချက်အတိုင်းဤကြည့်ပါ။ VITEC လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချခြင်းနှင့် bandwidth ကိုသတ်နှင့်အတူဝေးလံသောနေရာများမှဗီဒီယိုကန်ဆောင်မှုများလက်လှမ်းမမီတိုးချဲ့တစ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပစ္စည်းသို့ high-အရည်အသွေး, အနိမ့်နှောင့်နှေးဟာ့ဒ်ဝဲ codec ကိုပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်ဆာဗာအခန်းတစ်ခန်းထဲက ထွက်. လယ်သို့ HEVC encoding က၏အကျိုးကျေးဇူးများကြာပါသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏ Point-to-Point သို့အသံလွှင့်အလှူငွေဖြေရှင်းချက် HEVC (H.265) MGW Ace ကိုကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ, D265 ဒီကုဒ်ဒါနှင့် EZ တီဗီများအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့တစ်ခုတည်းသောခရီးဆောင် IP ကို ​​streaming များဖြေရှင်းနည်းဖြစ်ပါသည် IPTV.
IPTV & ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ်: ဒေသဆိုင်ရာဖောက်သည်တွေနဲ့ယင်း၏ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမှတဆင့် VITEC ဗီဒီယိုကိုဖြန့်ဝေဖို့လုံခြုံ, အရွယ်မှာကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောနည်းလမ်းရှာနိုင်ဖြစ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ, အားကစားနှင့်ဖျော်ဖြေရေး, ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်အစိုးရအပါအဝင်ကဏ္ဍ၏များပြားလှအနှံ့အဓိကဦးစားပေး, ကြောင်းကိုအဝတ်မခြုံဘဲဖြစ်ပါတယ်။ VITECEZ တီဗီ platform ကိုအနိုင်ရတဲ့ 's ဆုအများဆုံးအဆင့်မြင့်ကမ်းလှမ်း IPTV တိုက်ရိုက်လွှင့်နှင့်အတူအတွေ့အကြုံ, On-demand ဗီဒီယို, ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံဖမ်း, mosaic ကစားသမား, အချိန်-ပြောင်းလဲ TV နဲ့စိတ်ကြိုက်ကြည့်-and feel ။ EZ တီဗီအကြောင်းအရာလုံခြုံရေးနှင့်အသုံးပြုသူ-access ကိုထိန်းချုပ်မှုပြည်တွင်းနှင့် Multi-site ကို application များအတွက်စစ်တပ်ယူနစ်နှင့်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့်အသိအမှတ်ပြုကြသည်။ ထို့ပြင်ပလက်ဖောင်းရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ် module ကိုပြောင်းလဲနေသောအချက်အလက်များနှင့်အပြည့်အဝနှင့်အတူမျက်စိ-ဖမ်းဒစ်ဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာကယ်လွှတ်ခြင်းငှါအစွမ်းထက်ဟာ့ဒ်ဝဲ-based Endpoints ကိုအသုံးပြုသည် HD IPTV အကြောင်းအရာ။
နောက်နှစ်ကျော်, ကုမ္ပဏီတိုးချဲ့၎င်း၏လုပ်သားအင်အား၏ချဲ့ထွင်မှုဆက်လက်ရည်ရွယ်ထားရုပ်သံလိုင်းမိတ်ဖက်ဂေဟစနစ်ဖြစ်ပြီး, အထူးသဖြင့်ယူအေအီး၌, Oil & Gas, အသံလွှင့်ခြင်း, စစ်ရေး & ကာကွယ်ရေးကဏ္ဍကိုဖြတ်ပြီး key ကိုဖောက်သည်အကောင့်သို့ဂျော်ဒန်ထိုးဖောက်မှုပိုမိုနက်ရှိုင်းခြင်းနှင့် ကြက်ဆင်။
"2019 များအတွက်ထူးခြားတဲ့တစ်နှစ်ခဲ့ VITEC ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအရှိန်အဟုန်အပေါ်တည်ဆောက်ရန်ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ ကျနော်တို့ဒေသအဘို့ရှင်းလင်းစွာမဟာဗျူဟာရှိသည်နှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းအဖွဲ့အစည်းများအပေါငျးတို့သဒီဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုကိုဖြန့်ဝေလိုအပ်ချက်များအတွက်ရွေးချယ်မှု၏မိတ်ဖက်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်တည်ထောင်ရန်စိတ်အားထက်သန်နေကြတယ် "ဟု Pons ကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်။
အရှေ့အလယ်ပိုင်းများအတွက်ပထမဦးစွာဒေသဆိုင်ရာ Marketing Manager အဖြစ် Sennheiser ရက်ချိန်း Shraddha Mukul - ဇူလိုင်လ 2, 2019
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဘော့ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ အထောက်အပံ့ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော အရှေ့အလယ်ပိုင်း အသံလွှင့်ကုန်တင်ကားအပြင်ဘက်တွင် SoftAtHome, MStar, CES2017 က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် Vitec	2019-09-08
ယခင်: ထုတ်လုပ်မှုလက်ထောက် / ဒစ်ဂျစ်တယ် Imaging က Technician အ